अलमलीएको की अलमलाऊन खोजीएको ? - Muldhar Post
अलमलीएको की अलमलाऊन खोजीएको ?
मीन बहादुर पण्डित २०७६, १ भाद्र आईतवार 186 पटक हेरिएको
हत्याको मज़ुल्का उठाऊदा नै रडले हानेर मारीएको र खुट्टामा नील ड़ाम देखिएको भनिएको छ । यो त्यंहा उपस्थित मृतकका आफ़ंत, प्रहरी र पत्रकार आदी सबैले देखे अनुसार लेखेको हो, जसको स्पष्ट भिडियो समेत रहेछ । तर अपराधी चलाख भएर मर्नु अघि रबी फ़साउने गरी आत्म हत्याको भिंडियों बनाऊन लगाएछन । गल्ती न सालीग्रामको छ, न रबिको ? अत दुबै निर्दोस पात्र हुन । आत्महत्याको भिंडियो नै संकासपद छ । त्यसैले झ्याल बाट आऊने ती पल्लो कोठामा बसेका १४ जनाको ग्रूप खोजे हत्यारा पत्ता लाग्छ ।
लेखक : मीन बहादुर पण्डित
जग्गा दलाल को को हुन मार्ने पनी तिनै हुन । पैशाको चलखेलमा चीन्दीन भन्लान तर होटल वाला र स्थानीयले चीने कै ब्यक्ति हुनु पर्दछ । केस सिंपल छ, तर रबी फ़साऊन जालझेल नगरियोस । आन्दोलन गरेर लाख़ौ नेपालीको समय बर्बाद नगरीयोस । बिसाल जुलूस वा आन्दोलन हुनु भनेको प्रहरी र प्रशासन प्रति जन बिस्वास छैन भन्ने नै बुझिन्छ । पीड़ित डुबै पक्षलाई न्याय मिलोस । प्रहरी यस तर्फ कीन ध्यान दीदैन ? कीन भने झोले पत्रकार, बालूवा तस्कर, मेन पावोर वाला र ठुका भ्रष्टचारीका आँखाको तारा थिए रबी ।
सालीग्रामले अन्तिम समयमा रेकर्ड गरेका विडियोको प्रकृति हेर्दा आत्महत्या हुदै होईन । घड़ी कतै नठोक्की मरेको मांछेको घड़ी त्यसै रोकिन्न । ७:१० मा मृतकको घड़ी रोकिएको छ । त्यो भनेको मूठभेड़को समय हो । अर्कों कुरा ७:१०मा घड़ी रोकिए पछी, लास झुण्याए पछी बिस्तारै बत्ती निभाए र एक एक गरी अपराधी झ्याल बाट भागेको हुनु पर्छ । किन भने ७:१०को समयमा अंध्यारोमा सालीग्राम एक्लैले डोरि टांग्न कदापि सक्दैनन । जबकी ढोला फूटाएर हेर्दा बत्ती निभाएको छ भनिएको छ ।
सालीग्रामलाई रबी प्रति एत्रो रिस थियो भने पक्कै पनी रबीलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसवुकको प्रोफाइलमा राख्ने थिएनन् होला साहेद । केहि समय अगाडीको भिंडियोमा पनी उनले रबीलाई उनले गुरु मानेका छन । पोस्ट मार्टमको रिपोर्ट ढीला गरिनु कतै अली दीन रबीलाई दुःख दीने रणनीति त होईन ? वीडियो सम्पादन गरिनु पनी संकास्पद छ । रबीले समेत मेरो कुनै गल्ती छैन भनेको अवस्था छ । त्यसैले अलमलीएको की अलमलाऊन खोजीएको हो, बुझ्न गाह्रो भो ।